Redmi K20 आधिकारिक रूपमा मे २ 28 मा प्रस्तुत गरिनेछ Androidsis
केही दिन अघि यो कुरा प्रकट भएको थियो रेडमीको उच्च-अन्तमा पहिले नै एक नाम छ. चिनियाँ ब्रान्डले रोजेको नाम रेडमी के २० हो, यो पहिलो मोडेलको लागि उच्च-अन्तत्र खण्ड भित्र सुरू गरियो। यो फोनको बारेमा धेरै हल्लाहरू सुनेको केहि महिना भएको छ, जुन भित्र प्रोसेसरको रूपमा स्नैपड्रैगन 855 XNUMX हुनेछ। यही साताको अन्त्य डाटा आइपुग्यो उपकरण क्यामेराको बारेमा.
अब, हामी पहिले नै जान्दछौं हामी कहिले यो रेडमी K20 प्रस्तुत गर्न आशा गर्न सक्छौं? औपचारिक रूपमा। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च अन्त्य चीनमा पहिले नै प्रस्तुतिको मिति छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय सुरुवातको बारेमा अझै स्पष्ट छैन, र यसका बारे थुप्रै अफवाहहरू छन्।
हामीले लामो कुर्नु पर्दैन, किनकि अफवाहको रूपमा, प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम मेमा हुनेछ। मे २ the रोजिएको दिन हो रेडमी K20 को प्रस्तुतिको लागि। यो बेइजि inको एक कार्यक्रममा हुनेछ जहाँ हामी चिनियाँ ब्रान्डको यो फोन भेट्दछौं। यो बिहान आठ बजे (स्पेनिश समयमा) मनाईन्छ।
अहिले हामीलाई केहि थाहा छैन यस फोनको अन्तर्राष्ट्रिय सुरुवातको बारेमा। यस बारे धेरै शंकाहरू छन् किनकि केही मिडियामा यो अनुमान गरिएको छ कि यो चीनको बाहिर Pocophone F2 को रूपमा शुरू गर्न सकिन्छ, जुन अन्य Xiaomi ब्रान्डको दोस्रो पुस्ता हो। जहाँसम्म अहिले सम्म केहि पक्का छैन।
पक्कै पनि हामी यी दिनहरू जान्छौं कम्पनी को विशिष्ट योजनाहरु को बारे मा अधिक जानने। जे भए पनि, हामीले यो रेडमी K20 पहिले नै आधिकारिक नभएसम्म आठ दिन मात्र कुर्नु पर्छ। त्यसोभए हामी थाहा पाउनेछौं कि यो पोकोफोन ब्रान्ड अन्तर्गत चीनबाहिर साँच्चिकै सुरूवात भइरहेको छ कि छैन।
यो रेडमी के २० उच्च ब्याजको दायरामा ब्रान्डको प्रवेश भएकोले ब्याजको फोन हुने वाचा गर्दछ। ब्रान्डको मध्य दायरा एकदम राम्रो बिक्रिमा छ, नोट7को साथ हेलम। त्यसोभए हामी उनीहरूको उच्च-सीमाको दायराका लागि हाम्रो लागि भण्डारमा के छ हेर्नका लागि हामी तत्पर छौं। किनकि यसको बजारमा धेरै मनपर्नको क्षमता छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Redmi K20 सँग पहिले नै एक प्रस्तुतीकरण मिति छ
अब मेरो Huawei के हुन्छ कि यो एन्ड्रोइड को बाहिर समाप्त भयो